Gastrojiobiana Kambojiana: lovia sakafo Kambojiana | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | Kambodza, gastronomy, Fitsangatsanganana any Azia
Rehefa mandeha ny olona dia ara-dalàna raha te hanandrana ny gastrikanin'io toerana io izy io, fomba iray hahafantarana ny fomba amam-panao sy ny olona mipetraka amin'ny toerana manokana. Kambodza dia toerana fizahan-tany izay andehanan'ny olona maro isan-taona hahazoana fialantsasatra mahafinaritra.
Raha mikasa ny ho any Kambodza ianao dia hahaliana anao ity lahatsoratra ity.
1 Sakafo any Kambôdza
2 Ireo lovia mahazatra any Kambôdza
2.6 Chaa Kdam: foza nendasina
2.7 Voninkazo mena miaraka amin'ny hena sy basily
3 Desserts any Kambodza
Sakafo any Kambôdza
Na dia tsy dia maranitra na miovaova toy ny sisa amin'ny sakafo any Thailandy na Vietnam aza, ny sakafo any Khmer dia matsiro sy lafo ary mazava ho azy, miaraka amina vary izy.. Ny toetra Thai sy Vietnamianina dia hita ao amin'ny sakafo Kambodziana. na Khmer, na dia tia fofona mahery ao anaty lovia aza ny Kambodjiana, indrindra ny fanampiana prahok, ilay paty trondro malaza. Ho fanampin'ny sakafo Khmer, misy trano fisakafoanana sinoa marobe, indrindra any Phnom Penh sy ny faritany afovoany.
Mikasika ny fisehoan'ny sakafo Kambodziana dia nianatra zavatra tamin'ny sakafo frantsay izy ireo, Ny fanolorana ireo sakafo no resahiko etsy ambony. Izy ireo dia mahavita manao salady hena tsotra toa zavatra matsiro be (ary tsy miahiahy izahay na dia segondra iray fotsiny aza).
Lafiny iray hafa izay nitaoman'ny frantsay ny kambodjiana dia satria ny baguette malaza. Baguette dia mofo manify natokana ho an'ny sakafo maraina ary iray amin'ireo entana amidy indrindra amin'ireo mpivarotra amoron-dàlana izay mivarotra baguette amin'ny bisikiletany. Ny olona tsy manam-potoana hisakafoanana sakafo maraina tsara ao an-trano noho ny tsy fahampian'ny fotoana no tena mividy ity vokatra ity amin'ny mpivarotra amoron-dalana.
Misy fiantraikany amin'ny sakafo Kambodziana koa ny sakafo sinoa, hita mazava tsara amin'ny sakafo mampiasa paty sy dumpling io.
Toy ny fitsipika ankapobenyNy Kambodziana dia mazàna mihinana sakafo fihin-trondro sy vary. Misy fomba fahandro ho an'ny trondro, izay steamed nofonosina ravina akondro, lovia izay atolotry ny mpizahatany rehetra rehefa mihinana azy any Kambôdza izy ireo noho ny tsirony mahafinaritra. Raha mpihinana zavamaniry ianao, ny legioma vaovao dia azo aroso amin'ny saosy soja. Ary ho an'ny tsindrin-tsakafo dia azonao atao ny manafatra vary na voatavo flan. Fa raha te hahalala lovia mahazatra hafa ianao dia aza misalasala manohy mamaky.
Ireo lovia mahazatra any Kambôdza
Avy eo aho hiresaka momba ny lovia Kambodziana mahazatra, ka rehefa mandany andro vitsivitsy any ianao amin'ny fialan-tsasatra na rehefa tsy maintsy mitsidika azy ianao dia fantatrao izay tokony hanafarana any amin'ny trano fisakafoanana ary fantatrao ihany koa izay ananan'ny lovia tsirairay. Amin'ity fomba ity dia afaka mankafy bebe kokoa ny menio ianao.
Ny lovia mahazatra matsiro indrindra ao Khmer dia misy ny Amok, lovia malaza Kambôdza eo amin'ireo mpandeha. Izy io dia lovia voaomana amin'ny ronono voanio, curry ary zava-manitra vitsivitsy izay amboarina ao Thailand ihany. Amok dia vita amin'ny akoho, trondro na hena, ary ao koa ny legioma sasany. Indraindray dia arotsaka miaraka amin'ny ronono voanio sy vary amin'ny sisiny.
Etsy ankilany dia manana ny K'tieu koa isika, lasopy paty matetika atolotra ho an'ny sakafo maraina. Afaka omanina amin'ny henan-kisoa, hena na vokatra an-dranomasina izy io. Ny tsiro dia ampiana amin'ny endrika ranom-boasarimakirana, dipoavatra mafana, siramamy na saosy trondro. Somlah Machou Khmae dia lasopy mamy sy marikivy vita amin'ny mananasy, voatabia ary trondro.
Lovia mahazatra iray hafa an'io toerana io i Bai Saik Ch'rouk, natolotra ihany koa ho an'ny sakafo maraina. Fangaro vary miaraka amina henan-kisoa voatoto izy io. Etsy ankilany, Saik Ch'rouk Cha Kn'yei dia karazana henan-kisoa endasina izay hitanao amin'ny ankamaroan'ny toerana.
Lok lak dia hena chunky masaka antsasaka. Ity farany angamba dia iray amin'ireo sisa tavela tamin'ny fanjanahan-tany frantsay. Aroso amin'ny salady, tongolo ary ovy indraindray.
Chok Nom Bahn dia lovia kambôdzianina tiana indrindra, hany ka amin'ny teny anglisy dia antsoina hoe "paty Khmer" fotsiny izy amin'ny teny anglisy.
Chok nom Bahn dia sakafo mahazatra hanina maraina, ny lovia dia misy paty vary voadona mafy, nopetahany saosy kari Trondro miorina maintso vita amin'ny veromanitra, faka turmerika ary sokay kaffir. Ravina mintara vaovao, tsimoka tsaramaso, tsaramaso maintso, voninkazo akondro, kôkômbra, ary ahitra hafa manangona eo amboniny ary manome azy tsiro mahafinaritra. Misy ihany koa ny kininina karioty mena izay natokana ho an'ny lanonana fampakaram-bady sy fety.
Chaa Kdam: foza nendasina
Ny foza nendasina dia miavaka iray hafa ao amin'ny tanàna amoron-tsirak'i Kambôdza ao Kep. Ny tsenan'ny foza mivantana dia fanta-daza amin'ny fanaovana azy nendasina amina fanomanana maitso, dipoavatra Kampot, izay lehibe eo an-toerana avokoa. Ny sakamalaho Kampot manitra dia malaza eran'izao tontolo izao, na dia ny voatavo maintso any Kambodza ihany no azonao atao. Betsaka no milaza fa mendrika ny mandeha mankany amin'ity tanàna ity fotsiny ity lovia ity.
Voninkazo mena miaraka amin'ny hena sy basily
Na dia tsy zatra izany aza ianao dia misy ny zava-misy ary afaka mahita ny karazana bibikely rehetra ao amin'ny menio ao Kambôdza ianao ... tafiditra ao anaty lovia faran'izay hafakely koa ny tarantulazy. Saingy ny lovia manintona indrindra ho an'ny paladia vahiny dia ny vitsika mena voahidy hena sy basilà.
Samy hafa habe ny volombavaKely loatra ny vitsika sasany ka zara raha hita izy ireo ary ny sasany mety manana santimetatra maromaro. Voasana amin'ny sakamalao, veromanitra, tongolo lay, tongolo ary hena voapaika manify izy ireo.
Ny lovia dia azo ampiarahina amin'ny sakay mba hanomezana fofona manitra saingy tsy esorina ny tsiro mangidy izay ananan'ny hena ant. Omena vary koa matetika ny vitsika, ary raha tsara vintana ianao dia afaka miaraka aminao miaraka amina olitra vitsivitsy ao anaty vilia.
Desserts any Kambodza
Aza mieritreritra fa hadinontsika ny tsindrin-tsakafo, satria efa nanana an-tsaina Pong Aime (vatomamy) isika. Misy amin'ny ankamaroan'ny toerana ireo ary tsy isalasalana fa tena tsara ny fofony. Azonao atao ny misafidy karazana hena mamy natolotra tamin'ny vary, ronono mihinana ary rano siramamy.. Zavatra tsy hajanonao ny manandrana dia Tuk-a-loc, zava-pisotro mifototra amin'ny voankazo, atody manta, mamy amin'ny ronono mifangaro sy ranomandry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Kambodza » Zavakanto momba ny fahandro any Kambodza
Fampahalalana hankalazana ny Herinandro Masina 2016 ao Jerosalema